समाज Archives - Chanakya Post
चाडवाड लक्षित ट्राफिक व्यवस्थापन योजना : ४३ ठाउँमा विशेष चेकिङ, १४ स्थानमा सहायता कक्ष
काठमाडौं । दशैं, तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्व नजिकिएसँगै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकामा विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीको अधिकतम परिचालन, प्रभावकारी व्यवस्थापन,शीघ्र र सहज सेवा पहुँचको व्यवस्था मिलाएर चाडपर्वलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको हो । सो योजना सोमबारदेखि नै लागू भएको महाशाखाले […]
संविधान दिवस : महिला सशक्तीकरण बिना कसरी सम्भव होला आर्थिक समृद्धि ?
काठमाडौं । आज संविधान दिवस । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै देशमा एक चरणको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको थियो । नयाँ संविधानले निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको महिला आन्दोलनका केही मुद्दाहरू संवोधन गरेको थियो । महिलाहरूको लागि राज्यका निकायमा […]
यूके, अमेरिका र अस्ट्रेलियाले परिष्कृत रक्षा प्रविधिहरू आदानप्रदान गर्ने एउटा विशेष सुरक्षा सम्झौताको घोषणा गरेका छन्। उक्त कदम चीन लक्षित रहेको बताइएको छ। सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई पहिलोपटक परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने बाटो खुला गरिदिनेछ। ओकस भनिने उक्त सम्झौतामा आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र साइबरका पक्ष समेट्नेछ। प्रभाव इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो शक्ति र […]
आँखै अगाडिका तमाम बेथिति र रमिते सरकार
काठमाडौं । म आफ्नो कार्यालय (बानेश्वर)को झ्यालबाट बाहिरी सुन्दर दृश्य नियाली रहेको छु । मन्दमन्द चलेको बतास, पानी पर्ला पर्ला झैँ भएको आकाश । बादल र कुहीरोको छानो मुनिको काठमाडौं । अनि मनै लोभ्याउने क्षितज तल देखिएका हरियाली वनजंगल । लाग्दै छ कोठा भित्रैबाट पनि प्रकृतिका अनेक दृश्य हेर्दै आन्दित हुने उत्कृष्ट समय हो यो […]
कोरोना खोपमा उपलब्धी, १ करोड १ लाख डोज लगाइयो
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप १ करोड ९२ हजार मात्रा खोप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असार २९ गते पद सम्हालेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई आगामी चैतसम्ममा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार बुधबारसम्ममा १ करोड ९२ हजार १०६ मात्रा खोप लगाइसकिएको स्वस्थ्य […]
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा हट्यो, अब के-के खुला भयो ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा हटाइएको छ । बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले ५ महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा हटाउने निर्णण गरेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञा हटेको जानकारी गराएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले विज्ञप्तिमार्फत ‘निषेध’ शब्दलाई हटाएर भदौ […]
निषेधाज्ञा भदौ १६ सम्म थप, राति ८ बजेपछि गाडी चलाउन पाइने, के-के गर्न पाइँदैन ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा भदौ १६ गतेसम्म लम्ब्याइएको छ । मंगलबार बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि एक साता थपगर्दै १६ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि आज राति १२ बजे सकिँदैछ । थप गरिएको निषेधाज्ञामा केही प्रावधान खुकुलो बनाइएको छ । […]
काबुल । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालिबान समूहलाई हराउन त्यहाँको सरकारी सेनालाई हतियार तथा अन्य बन्दोबस्तका सामान आपूर्ति गर्न अरबौं खर्च गर्यो । तर अफगानी सुरक्षा बलको द्रूत पतनले विद्रोहीहरूको हतियार सङ्कलनमा सफलता मिलेपछि उनीहरूलाई थप आक्रामक बन्न सहयोग पुगेको छ । अमेरिकी सेनालाई हटाउने र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी छोड्ने आफ्नो निर्णयको रक्षा गर्दै […]